Ra’iisul Wasaare Kheyre oo kormeer ku tagay qeybo ka mid ah gobolka Banaadir • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Ra’iisul Wasaare Kheyre oo kormeer ku tagay qeybo ka mid ah gobolka Banaadir
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo kormeer ku tagay qeybo ka mid ah gobolka Banaadir
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kahyre ayaa xalay kormeeray qaar ka mid ah saldhigyada Degmooyinka Gobolka Banaadir iyo kantarooladda maagaalada, isagoo u kuurgalayay xaaladda guud ee amniga Muqdisho.
Waxaa ku wehliyey kormeerka Ra’iisul wasaaraha Wasiirka Amniga, guddoomiye kuxigeenka dhanka amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir,saraakiisha Booliska iyo Asluubta ayaa
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa warbixino ka dhegaystay saraakiisha laamaha ammaanka,iyadoo la soo bandhigay Baco lagu soo xirey Baaruud loo ekeysiyay waxyaabo qarxa,kuwaasi oo xalay ka dhacay Muqdisho,si dhagarqabayaashu ay shacabka u qal qalgeliyaan.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Jenaraal Bashiir Cabi Maxamed ayaa Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya warbixin ka siiyay amniga iyo wixii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
“Abaaro halsaac iyo bar laga bilaabo waxaa la soo tuuray waxyaabo ku jira baco oo baaruud ah 5 Xamarweyne ayaa lagu soo ridey,2 Waaberi,2 degmada Wadajir,majiraan wax khasaare ah oo ka dhashey,waxaa ladoonayay oo kaliya in lagu qal qalgeliyo shacabka”.Ayuu yiri Taliye Bashiir.
Wasiirka amniga gudaha Mudane Maxamad Abuukar Islow Ducaale ayaa faah-faahin guud ka bixiyay ujeedka kormeerkan oo uu hoggaaminayay Ra’iiul Wasaare Xasan Cali Khayre.
“Caawa waxaa kormeer shaqo aan ku tagnay saldhigyada waxaana hoggaaminayay Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya,waxaan ka soo bilownay Kaaraan,ilaa Galgalata, Suuqa Xoolaha, waxaan ku soo geba-gebeynay ilaa magaalada daafaheeda, si aan u ogaano sida ay ciidamadu ay u sugayaan amniga Muqdisho,shacabka waxaan doonaynaa in ay ku kalsoonaadaan dowladooda,waxaana ka codsanaynaa in shacabku ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka ayuu yiri Wasiir Islow.
Dowladda Soomaaliya ayaa sameysay ciidamo isku dhaf ah oo loo diyaariyay in ay sugaan amniga caasimadda, kuwaasi oo la sheegay in ay howl galo ballaaran ka wadaan gudaha iyo daafaha magaalada Muqdisho.